भगवान कृष्ण :: रूबस पराजुली :: Setopati
अस्ति कृष्ण जन्म अष्टमी थियो। कृष्ण भगवान जन्मेको दिन भएकाले सरकारले विदा पनि दियो। हामीले विदासमेत पाएको कृष्ण भगवान को हुन्?
कृष्ण भगवान विष्णुका अवतार हुन्। उनी सह्रै चलाख थिए। एक दिन उनका मामा कंश रिसाएकाले राक्षस पुतनालाई भनेर कृष्णलाई मार्न आदेश दिए। पुतनाले 'हुन्छ' भने। कृष्णलाई भेटी दुध खुवाउन के थालेकी थिइन् उनले, कृष्णले चाल पाए। उनको दुध टोकेर पुतनालाई नै मारिदिए।
यो कुरा थाहा पाएर कंशले कृष्णलाई आफैं मार्ने कोशिस गरे तर सकेनन्। उता महाभारतको लडाइमा कृष्णले पाण्डवको पक्ष लिए। उनले अर्जुनलाई विभिन्न अर्ति-उपदेश दिए। तिनै उपदेशलाई हामी गिता भनेर पढ्छौं। महाभारतमा पाण्डवहरूलाई भगवान कृष्णले साथ नदिएको भए उनीहरूले जित्न सक्ने थिएनन्। उनीहरू असल भएकाले नै भगवान कृष्णले पक्ष लिए।
यसर्थ, हामी पनि असल भइयो भने भगवानले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। दुषकर्म गरियो भने सँधै हार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ।
(रुबस पराजुली जी एस निकेतन माध्यामिक विद्यालय, हेटौडा, मकवानपुरमा कक्षा तीनमा अध्ययनरत छन्।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८, ०४:५१:००
कृषिलाई हेर्ने नजर सुधारौं, देशले फड्को मार्नेछ
झापा जाँदाको अनुभव
नानी, ठूलो भएर के बन्छ्यौ?
रमाइलो दसैं यात्रा
दसैं गाउँमै रमाइलो